फोटोशपमा कार्यहरू सिर्जना गर्नुहोस् सम्पादन प्रक्रियामा समय बचत गर्न क्रिएटिव अनलाइन
Cपछाडि कार्यहरू Photoshop बचाउनु सम्पादन प्रक्रियामा समय धेरै राम्रो विचार हो जब हामीसँग धेरै त्यस्तै तस्वीरहरू छन् र हामी चाहन्छौंउही समान सम्पादन शैली तिनीहरूमा लागू गर्नुहोस् Photoshop। कार्यले हामीलाई अनुमति दिन्छ विशिष्ट प्रभाव सिर्जना गर्नुहोस् र पछि छविमा यी प्रभावहरू लागू गर्नुहोस् स्वत:। सक्छ डाउनलोड गर्न शेयरहरू इन्टर्नेटमा वा साधारण रूपमा हाम्रो आफ्नै कार्यहरू सिर्जना गर्नुहोस् भविष्यका संस्करणहरूको लागि।
यदि तपाइँ बारम्बार आफ्ना फोटोग्राफहरूको साथ सम्पादनहरू दोहोर्‍याउन थकित हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईका कार्यहरू प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस्। Photoshop लागि समय बचत गर्नुहोस् र अधिक एउटै मुद्दा बारम्बार दोहोर्याएर बोर हुन छोड्नुहोस्। हामी एउटा छवि फेला पार्न सक्दछौं जुन एउटा कार्य लागू गरे पछाडि हामीले प्रकाश, छाया, र etc आदि जरुरी नै चाहेका थिएनौं, यदि यो कार्यसँगै भयो भने यो समस्या हुने छैन। Photoshop हामीलाई एक पटक कार्य लागू भएपछि अनुमति दिन्छ, retouch विकल्पहरू कुशलतापूर्वक.
हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा एउटा कार्य सिर्जना गर्नुहोस् मा कार्य मेनू खोल्न मा फोटोशप, यदि यो लुकेको छ भने, हामी यसलाई मेनु / विन्डो / कार्यहरूमा हटाउन सक्छौं।
हामी कार्य मेनू खोल्छौं र नयाँ कार्य विकल्प थिचेर एउटा कार्य सिर्जना गर्छौं।
एकचोटि हामीले कार्य सिर्जना गरिसकेपछि, हामीले गर्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको विकल्प दिनु हो रेकर्डि start सुरू गर्नुहोस् (क्रियाहरू मेनू) यस क्षणबाट सबै प्रक्रियाहरू हामी के गर्छौं रहनेछौं हाम्रो कार्यमा दर्ता गरियो। हामी कर्भहरू, र change्ग परिवर्तन, स्तरहरू ... हाम्रो फोटोग्राफीका लागि सबै आवश्यक retouching लागू गर्न सक्दछौं।
तलको छविमा हामी देख्न सक्छौं कि कसरी कार्यले छविमा गरिएका प्रत्येक परिवर्तनको रेकर्ड गर्दछ र यी प्रक्रियाहरूमध्ये केही लुकाउन पनि सक्छ।
समाप्त गर्न हामीले केवल रोक्नु पर्छ रेकर्डि।/रेकर्डि stop रोक्नुहोस्n (क्रियाहरू मेनु) एक पटक कार्य बन्द भएपछि, हामी हाम्रो छवि बचत गर्न सक्छौं.
Para हाम्रो नयाँ कार्य लागू गर्नुहोस् भविष्यका छविहरूमा हामीले भर्खर छवि खोल्नु पर्छ Photoshop र कार्य (मेनू) कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न विकल्प थिचेर कार्य सुरू गर्नुहोस्।
कार्यहरूको साथ तपाइँले ती तस्बिरहरूमा समय बचत गर्नुपर्नेछ जुन समान रिचच हो, यो सुनिश्चित गर्दै कि सम्पादन प्रक्रिया दोहोरिने छैन। तपाईं निर्दिष्ट सम्पादनहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस प्रकारको सम्पादनको लागि अनुसरण गर्नुभएको चरणहरू नभुल्नुहोस्। कुनै कार्य डाउनलोड गरेर प्रयोग गरेर समान रूपमा लागू हुन्छ जुन हामीले पोष्टको अन्तिम भागमा देख्यौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » समय बचत गर्न फोटोशपमा कार्यहरू सिर्जना गर्नुहोस्